Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Ralph Hasenhuttl Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Ralph Hasenhuttl na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Ndụ, Net Net na Ndụ Nke Onwe.
Ọ bụ nkọwa dị nkenke banyere akụkọ ndụ Ralph Hasenhutt site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ihe ndị dị ndụ, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Akụkọ ndụ Ralph Hasenhuttl
Ee, onye ọ bụla maara banyere mmeri ya megide Liverpool nke mere Klopp were iwe na 11 ya. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Ralph Hasenhuttl Nwatakiri Akụkọ nke:
Iji malite, ọ naghị enwe aha otutu "Klopp nke alps." Ralph Hasenhuttl mụrụ na 9th nke August 1967 n'obodo Graz na Austria. Amuru ya nne ya, Ingrid na nna ya, Gilbert.
Zute nne na nna Ralph Hasenhuttl.
Ralph Hasenhuttl Ezinụlọ:
Nwa nwoke Ingrid na Gilbert bụ onye Ọstrịa. Ọzọkwa, Nnyocha e mere iji chọpụta ezinụlọ ya sitere na-egosi na ọ sitere na mpaghara German na-asụ Ọstrịa akpọ Graz (obodo amụrụ ya).
Dịka nwatakịrị, nwa amaala Graz na-eme ọtụtụ egwuregwu na ịgba egwu. N'ezie, ya na nwanne ya nwanyị na-agba egwú mgbe ụfọdụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, nne na nna Hasenhuttl chere na ọ dị umengwụ n'ihi na ọ chọghị ibido ime ihe ọ bụla metụtara mmasị nwata.
Ralph Hasenhuttl tolitere na obodo Graz.
Ralph Hasenhuttl Mụrụ Ezinụlọ:
Ihe nwatakịrị ahụ na-emeghị ka ndị mụrụ ya nwee nchegbu. N’ihi ya, ha na-ajụkarị ya ajụjụ gbasara ihe ndị ọ chọrọ ime n’ọdịnihu. N'ezie, ego abụghị nsogbu nye ndị nne na nna Hasenhuttl bụ ndị biri ndụ ibi ndụ n'etiti ụlọ. Naanị ihe ha chọrọ bụ iji hụ na ọ ghọrọ onye ihe ịga nke ọma.
Ralph Hasenhuttl na-egwu egwuregwu:
N'ụzọ dị mma, nwata nwoke na-egwu egwuregwu ọtụtụ kwadoro ịgba bọl. N'ezie, ọ ghọrọ akụkụ nke ụlọ ọgbakọ GAK tupu ọ dị afọ 10. Ọ bụ otu ndị otu ka o bilitere n'ọkwa ma mee ka ndị otu egwuregwu izizi ya na oge 1985-86. N'ikpeazụ, Hasenhuttl nwere ọgwụ na-arụpụta ọrụ na FK Austria Wien.
Lee nkọwa nke mgbe ahụ gaa n'ihu na GAK.
Ọ gara n'ihu ịzụ ahịa ya dị ka Austria Salzburg na-aga n'ihu tupu ya egwu egwuregwu ndị Belgium, Mechelen na Lierse. N'ikpeazụ, ọ laghachiri na German ka ya na FC Koln, Greuther Fürth na Bayern Munich II nọrọ tupu ya atụkwasị akpụkpọ ụkwụ ya.
Ralph Hasenhuttl Afọ ndị mbụ na Football Management:
Dị ka ọtụtụ ndị njikwa, Hasenhuttl malitere ọrụ nkuzi ya na ala. Ọ malitere na uwe 3 Bundesliga Unterhaching dị ka onye njikwa ntorobịa. N'ikpeazụ, ọ ghọrọ onye nchịkwa nchịkwa na n'ikpeazụ onye isi nchịkwa na Unterhaching nke ọ na-enweghị obere ihe ịga nke ọma.
Ọ malitere na ala site na otu ndị na-enwebeghị ihe ịga nke ọma.
Ralph Hasenhuttl Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N’afọ ndị sochirinụ, onye nkụzi na-eto eto mere ike ya nile imere onwe ya aha. Nke mbu, site na VfR Aalen nke o nyeere aka inweta nkwalite na 2 Bundesliga. N'oge na-adịghị anya, Hasenhuttl na Hantavirus nọ.
N'ụzọ dị mma, ọ gbakere n'ime izu atọ ma laghachi na ịkwalite ụzọ. Na-ekwu okwu nke, ị maara na ọ dugara ndị ọzọ ya na FC Ingolstadt 04 iji nweta nkwalite na Bundesliga maka oge mbụ? Ugbu a ị maara.
Hụ onye nyeere Ingolstadt aka ịkwalite Bundesliga na nke mbụ ya.
Ralph Hasenhuttl Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'elu ọnụ ọgụgụ ọrụ ya, onye nchịkwa na-arụsi ọrụ ike sonyeere RB Leipzig ọhụrụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ hụrụ ha ka ha gwụchaa ebe nke abụọ na oge izizi ụgbọ elu ha. Mgbe ya na ndị German nọrọ oge ọzọ, Hasenhuttl hapụrụ na 2 iji zaa oku Southampton.
Ndị nsọ nwere obi ụtọ na ọ ghọrọ onye nchịkwa ha na 2018.
Hasenhuttl anọwo na-arụ ọrụ nke ọma kemgbe ọ bịarutere South Coast iji nwee ihe ịga nke ọma Mark Hughes. Agbanyeghị na ndị otu ya meriri ụlọ 9-0 mere ihe efu na Leicester na Ọktọba 2019, o weghachitere obi ike ha wee duru ha gaa ihe ndị ọkachamara kọwara Njikọ Njikọ nke Premier League kasị ukwuu.
Mgbalị ya iji debe ndị nsọ na Premier League ahụwo ya ka ọ na-edekọ nnukwu mmeri. Onye mmeri kachasị nke a bụ mmeri ndị mmeri na - enweghị atụ 1 meriri Liverpool na St Mary. N'ihi ya, onye nchịkwa na-arụsi ọrụ ike nwere obi mmụọ mgbe egwuregwu ahụ gasịrị n'ihi na iti Liverpool bụ nrọ nke mezuru. O doro anya na ọ bụ ngọzi nye ndị nsọ ma duru ha gaa ebe dị elu.
Ọnye na-bụ Ralph Hasenhuttl Wife?
N'azụ njikwa ọ bụla dị egwu bụ onye gị na ya na-ebi ndụ. Dịka ị nwere ike ịchọpụta, Hasenhuttl akọghị na ngalaba ahụ. Aha nwunye ya bụ Sandra, ha abụrụla di na nwunye ọtụtụ afọ. Sandra ga-abụrịrị enyi nwanyị ya tupu ya ekweta ịbụ nwunye ya.
Ralph Hasenhuttl na nwunye ya Sandra.
Ọzọkwa, ọ na-anọkarị n'akụkụ onye njikwa ahụ mgbe ọ na-anọghị n'ọrụ. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, alụmdi na nwunye ha nwere ụmụ abụọ. Ha bụ Patrick na Philip. Patrick dị ntakịrị egwu n'ihi na ọ na-egwu bọọlụ maka German 3. Liga n'akụkụ - SpVgg Unterhaching dị ka ịga n'ihu.
Ralph Hasenhuttl yiri ka ọ na-enye nwa ya nwoke Patrick ndụmọdụ dị egwu ebe a.
Ralph Hasenhuttl Ndụ Ezinụlọ:
Emeghị ndị njikwa mara ọkwa na Mars. Ha nwere ezinaụlọ nwere usoro ọmụmụ. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Ralph Hasenhuttl. Anyị ga-emekwa ka nkọwa nke ụmụnne ya na ndị ikwu ya dị Ebe a.
Banyere Ralph Hasenhuttl Nna:
Dịka e kwuru na mbụ, aha nna nna ahụ bụ Gilbert. You maara na ọ bụ onye ịgba egwu? Na mgbakwunye, Gilbert bụ ọkaibe na-ese ihe. Ọ bụ ya 80s n'oge ederede a biography. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka dị mma ma dịkwa njikere ịdị ndụ ruo ọtụtụ iri afọ.
Banyere Ralph Hasenhuttl nne:
N'aka nke ọzọ, aha nne manịja ahụ bụ Ingrid. Dị ka di ya, ọ bụ onye ịgba egwu. E wezụga ịgba egwu, Ingrid nwere mmasị na mmiri na ejiji. Hasenhuttl nyere ya otuto maka ịme kuki kachasị mma n'obodo ya.
Ralph Hasenhuttl na ndị mụrụ ya.
Banyere Ralph Hasenhuttl Nwanyị:
N'ebe nne na nna ya nọ, enwere onye ọzọ onye nchịkwa nọ nso. Ọ bụ nwanne ya nwanyị a ma ama nke ya na ya tolitere. N'akụkụ ya, ọ dịbeghị aha ọzọ e kwuru banyere ụmụnne ndị ọzọ.
Banyere Ralph Hasenhuttl Mmekọrịta:
Are na-achọ nne na nna ochie nke njikwa ahụ? Otú ahụ ka anyị dịkwa. Youchọrọ inwe ndekọ banyere nwanne nna ya, nwanne nna ya na ụmụ nwanne nne ya? Nabata na klọb. Enwere olile anya, nwa nwanne ya na nwanne ya nwanyị ga-amata ya otu ụbọchị. Anyị na-atụ anya ya.
Ralph Hasenhuttl Ndụ Nke Onwe:
Onye bụ onye njikwa na mpụga bọọlụ? Ọ bụ n'ezie the 'Alpine Klopp' onye kwetara na ya bu onye nzuzu? Nọdụ ala dị ka ịkọwapụta eziokwu banyere ụdị onye ọ bụ. Iji malite, Hasenhuttl abụghị onye nzuzu n'ụzọ nkịtị. Ọ dị ntakịrị karịa. Site na dị egwu, anyị pụtara na ọ dabaghị na foto gị nke onye nchịkwa.
Ọ dị jụụ n'ụzọ dị mma, dọọ aka ná ntị ma họrọ mmiri ara ehi na mmanya. Hasenhuttl nwere mmasị n'ịkpọ piano, ọrụ nke na-aga nke ọma na ọdịdị dị jụụ ya. Oge ndị ọzọ ọ na-egwu egwuregwu tenis, na-eme egwuregwu ski, hockey ice na ọbụlagodi mgbidi canyon.
Ọ kabeghị aka ịnụ ụtọ nkume.
Ndụ Ralph Hasenhuttl:
Ga-anọrịrị ebe a inweta ozi banyere etu onye njikwa ahụ si eme ma na-emefu ego ya. Ka anyị malite site na ụgwọ ya. Ọ na-eburu £ 6 nde kwa afọ ma nọrọ n'etiti otu n'ime ndị isi nchịkwa 10 kachasị akwụ ụgwọ na Premier League.
Anyị niile maara banyere ndụ okomoko nke na-abịa na njikwa bọl. Inwe ugbo ala di iche iche ma bi n'ulo ndi mara nma bu ihe kacha nta n'ime nchegbu ya. N'ezie, enwere ndokwa maka ihe niile ọ ga - achọ (gụnyere ezumike) iji hụ na ọ na - arụ ọrụ ya nke ọma.
Eziokwu Banyere Ralph Hasenhuttl:
Iji mechie mpempe a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, lee eziokwu ị na-amaghị banyere ya.
Kwa Afọ £ 6,000,000.
kwa ọnwa £ 500,000.
Kwa Izu £ 115,207.
Kwa .bọchị £ 16,458.
Kwa elekere £ 686.
Kwa Nkeji £ 11.
Sekọnd £ 0.18.
Ebe ọ bụ na ị na-ele Ralph Hasenhuttl Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Southampton.
Eziokwu # 2 - The Nledo:
Mgbe ole Jurgen Klopp bụ onye njikwa nke Dortmund, ọ nwere njem ịga njem oge na Austria. Ọ bụ oge a napụrụ Hasenhuttl n'oge na-adịbeghị anya site na klọb mbụ ọ jisiri ike Unterhaching. Ya mere, o nwere oge iji chebe ma gbagoro igwe kwụ otu ebe iji lelee usoro ọzụzụ nke Dortmund. Onweghi onye matara onye ọ bụ n’ihi na ọ na-ekpu okpu agha.
Eziokwu # 3 - Mmekọrịta ya na Klopp:
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara eziokwu ahụ bụ na a mụrụ Hasenhuttl na onye njikwa Liverpool izu asaa iche. Ọzọkwa, ha bara ụzọ nkuzi ha n'otu oge. Kedu ihe ọzọ, Hasenhuttl nwere mmasị na German. Otú ọ dị, ọ naghị enwe obi ụtọ ma e jiri ya tụnyere ya. Ọ bụ onye pụrụ iche na enweghị atụ na obere ụzọ ya.
Onye nwe obodo Ọstrịa ahụ na-asọpụrụ ma na-asọpụrụ ibe ya nke German.
Eziokwu # 4 - Mmetụta:
N'etiti ịrị elu ya ịbụ onye nchịkwa mara mma, Hasenhuttl nyekwara aka maka ịrị elu nke ụfọdụ ndị na-eto eto. N’ezie, o kere kpakpando Timo Werner, Naby Keita, na Emil Forsberg.
Onye njikwa ahụ emeghị ihe ịrịba ama ọ bụla ma ọ bụ mmegharị aka nke na-ekpughe ọnọdụ ya n'okwu nke okwukwe. Agbanyeghị, enwere ndị na-egosi na ọ bụ onye Kristian. Were aha mbụ ya (Ralph) dịka ọmụmaatụ, na nke nna ya (Gilbert). Ichefuola nke ụmụ ya ndị a ngwa ngwa? Pịrịgaa elu iji gosi.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Ralph Hasenhuttl na akụkọ ndụ ya. Anyị na-atụ anya na akụkọ banyere otú ọ 'bịara gbanwee' ma maa jijiji ndị nsọ emeela ka ị kwenye na anyị bụ ihe anyị na-eme ugboro ugboro. Dị nnọọ ka Hasenhuttl nọ na-agbanwe ìgwè ndị ọzọ tupu ya erute Southampton.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna njikwa mma maka nkwado ha na bọọlụ ya na njikwa ya n'okwu na omume. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Aha zuru ezu: Ralph Hasenhuttl.
aha otutu: "Klopp nke alps."
Age: 53 afọ na ọnwa 6.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 9 nke Ọgọstụ 1967.
Ebe amụrụ onye: Obodo Graz dị n’Austria.
Ndị nne na nna: Ingrid (nne), Gilbert (nna).
Ụmụnne: Nwanne nwanyị.
Ogologo na cm: 191cm.
omume ntụrụndụ Gba egwu piano, ịkụ tenis, ịgba ọsọ, hockey ice na ọbụlagodi mgbidi canyon.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Obodo Ọstrịa.
ụgwọ 6 nde.